Ucwaningo Phakathi kukaPhumlani Mfekayi (umfundi waseNyuvesi yaKwa-Zulu Natal) no-Irina Mthembu oyisakhamuzi saseNanda mayelana nempilo yakhe kanye nakukhumbulayo, ngomhla zingama 24 kuMfumfu kowezi-2014. Phumlani: sawubona gogo Irina: yebo mzukulu unjani? Phumlani: ngiyaphila gogo, lona okhuluma naye uPhumlani wakwaMfekayi. Ngisuka eNyuvesi yaKwaZulu Natali. Ngizokwenza ucwaningo mayelana nempilo yakho njengesakhamuzi saseNanda. Ngaphambi kokuba ngihambe kakhulu bengingathanda ukwazi ukuthi […]
iqoshwe ngu eNanda.co.za in Umlando & Nesikukhumbulayo, Umphakathi 0 imibono
Ingxenye kaMafukuzela yobuciko
Ingxenye ka Mafukuzela yobuciko iwumhlangano wamakhono owafakwa abafundi abasuka esikoleni Ohlange. Ngemigqibelo yonke ntambama ngaphezu kwentsha enga-100 esuka endaweni ihlangane ndawonye elabhulari yesikole ukuzokwenza umculo, amaphowemu, umdanso nokunye okungamakhono. Njengo Siyathemba Makhoba, ongomunye wamalunga enhlangano, uchaza ukuthi abafundi bafakwa umfutho izinhlelo zomphakathiezaqala ukuqhuntshwa ngabafundi nabaphathi bohlelo amasiko namagugu nezokuvakasha e-UKZN, ikakhulukazi “ikilabhu lezokuvakasha ” kanye […]
iqoshwe ngu eNanda.co.za in Umphakathi 0 imibono
IWoza eNanda Walking Trail isiqala se Durban Green Corridor namalunga ayo. Inhloso ukuletha izivakashi nezihambi eNanda kanye nokwakha amathuba kubo ngokuhlangana nabantu bomphakathi. Kunezinhlangano eziningi ezingekho ngaphansi futhi ezizimele ezizimbandakanya ukusiza umphakathi. Kunama NGO,s ngezansi onke ayazimukela izivakashi (ngokunjayelekile ngokuhleleka). Thola ukubona ngaso sonke isikhathi futhi ubhekane nezinkinga zomphakathi nezipiliyoni ukuthi bazisiza kanjani futhi basizana […]
iqoshwe ngu eNanda.co.za in Ezokuvakasha, Umphakathi 0 imibono
IWoza eNanda Walking Trail isiqalo se Durban Green Corridor namalunga ayo. Inhloso ukuletha izivakashi eNanda futhi ibadalele amathuba okuhlangana nomphakathi. Kunezi tolo ezincane eziningi, izindawo zokuqeda ukoma nezinye izinhlobo zamabhizinisi nabaphisana ngezimpahla eWoza eNanda Walking Trial. Bonke bancengwa iqembu lephrojekthi yethu, kodwa abanye abafunanga ukufakwa kule webhisayithi ngezizathu ezithile, isibonelo, ngoba azimukelekile izivakashi. Amabhizinisi angezansi […]
Kusanezindawo ezinkulu eziluhlaza eNanda futhi iWoza eNanda Walking Trail isebenzela ikakhulukazi ngasemfuleni noma eduzane kwezindawo zezithelo endaweni encane. Njenge zitshalo esizithandayo ziyatholakala la. Ezinye zisentshenziselwa izihloso zokwakha amakhambi noma zihlanganiswe nesiko nangezinkolelo. Kodwa kunezitshalo ezigugulekile okufanele zinakwe noma zigugulwe. Umbheki wethe wezitshalo, uLindani Zuke, unika izincazelo kodwa uyacelwa ukuba ufake ulwazi lwakho ngokuphawula ezansi noma […]
iqoshwe ngu eNanda.co.za in Amasiko & Amagugu, Ezokuvakasha, Umphakathi 0 imibono
Ngomhlaka zi-22 kuLwezi iqembu elithuthukisa i-Woza eNanda Walking Trail bahlangene ePhoenix Settlement ukuhlanganisa izipiliyoni zohambo phakathi koHlange nePhoenixngeviki eledlule. Abahlanganyeli babelana ngezinto ezinhle, kodwa bakuthinta nokuyizinkinga, okufana nokungcola, amasewerage kanye nokuguguleka. Uhlelo lweviki, iqembu lase BMK engineering lizimbandakanye ekuvuleni indawo, lokhu okumanje kuthathe indawo engangamamitha amathathu (3) ubude bendawo, kodwa kufane ilulwe. Ukungcola namapayipi ezindlini […]
Despite the rainy weather, a dedicated task team set out on an exploratory walk from Phoenix Settlement to Ohlange on Friday 15 November. This followed the inaugural planning meeting held the previous week. The team found that the trail has great appeal and could become both a unique resource for the local community and a […]
Uhlelo lemisebenzi yezandla eSizimisele Development Trust
uMlando kaJohn. Langalibalele Dube
Our Partners and Related Projects